प्रेम मै संसार अडिएको छ : नायिका आशिष्मा नकर्मीसंग अन्तरंग संवाद - samayapost.com
प्रेम मै संसार अडिएको छ : नायिका आशिष्मा नकर्मीसंग अन्तरंग संवाद
समयपोष्ट २०७३ माघ १५ गते ३:२५
अभिनय क्षेत्रमा लाग्नुको कारण ?
सानै देखि ईन्ट्रष्टेड थिए । मेरो फेमली मेरो बाबा पनि यहि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ । संगित क्षेत्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो परिवारका म चौथो जेनेरेसन हो । हजुरवुबा शास्त्रिय संगितमा विज्ञ गर्नुभएको छ । बाबा पनि सितारा बादक हो । म बच्चै देखि नाचगान गर्थे र सितारा बजाउथे ।
कहिले देखि अभिनय थाल्नु भो ?
मैले सन् २००४ देखि अभिनय थालेकी थिए । नेवारी म्युजिक भिडियोबाट अभिनय सुरु गरेको हो । एस.एल.सी पछि नै मैले यस क्षेत्रमा पाईला चालेकी हु ।
यो क्षेत्रमा अभिनय भन्दा पनि यौवन विक्छ भन्छन् नि ?
त्यस्तो होईन । मैले पहिले देखि पनि भन्दै आईरहेको छु । दर्शकहरु छुट्टा छुट्टै हुन्छन् । कतिपय दर्शक अभिनय मन पराउने हुन्छन्,कोहि यौवन हेर्ने हुन्छन् । कसैलाई सामाजिक विषयको चलचित्र मन पर्छ । कसैलाई लभ स्टोरी मन पर्ला ।
सघर्ष नै हो । हामि हर बखत संघर्ष गरिरहेका हुन्छौ । बाँच्ने कोसिस गरिरा हुन्छौ ।
प्रेम जिवन हो । बिना पे्रम म त केहि पनि पाउदिन । किनकि बिहान उठेर आमाले एक कप चिया दिनुहुन्छ । त्यहाँबाट पे्रम सुरु हुन्छ । दिन भरि साथिभाई संग भईन्छ । बेलुकी घरमा बाबाले दिनभरी के–के भयो, कस्तो भयो भनेर सोध्नुहुन्छ ? बैनीहरु खायो की खाएन भनेर सोध्छ । त्यहि नै हो प्रेम । प्रेम मै संसार अडिएको छ ।
पहिलो प्रेम थियो । नामै त म भन्न रुचाउदिन उहाँको । अहिले हामि संगै छैनौ ?
कसैसंग डेट जाने चाहाना छ ?
मैले अहिले त्यो सोचेको छैन । हर दिन मेरो जिन्दगीको नयाँ संघर्ष छ । मान्छेहरुको भिडबाट छुट्टै पहिचान बनाउन खोजिरहेकी छु ।
समाज हो । सृष्टि चलाउने एउटा अपरिहार्य कुरा हो ।
प्रेममा सेक्स अनिवार्य छ ?
अहिले म यो बिषयमा केहि भन्न चाहन्न ।
तपाँईलाई मन पर्ने एक जना नेपाली नायिका ?
भबिष्यको सपना ?
कलाकार । एउटा धेरै अनुहारको बिचमा म आफुलाई स्थापित गराउन चाहान्छु ।
पछिल्लो समयमा नायिका बन्ने लहड निकै नै देखिन्छ, नायिकाहरुको बिचमा तपाँईको छुट्टै पहिचान चाँहि के हो ?
पहिलो कुरा संगितको माहोलमा हुर्केर बुझेर यो क्षेत्रमा आएकी हुँ । म डिसिप्लीनमा छु । मलाई काम भनेको पुजा हो जस्तो लाग्छ ।
आदर्श व्यक्ति ?
अरिवंश,मदनकृष्ण र मिथिला शर्मा ।
घुम्न मनपर्ने नेपालका कुनै तिनवटा स्थान ?
मुस्ताङ, बन्दिपुर र काठमाण्डौ ।
सबैभन्दा बढी के मा विस्वास गर्नुहुन्छ ?
काम गराईमा ।
खास त्यस्तो रोजाई छैन । मलाई सबै खाना मन पर्छ ।
तपाँईलाई मिठोगरि पकाउन आउने खाना ?
तपाँई प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ ?
मैले यस बारेमा सोचेको छैन । म प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पनि राम्रो नागरिक बन्न चाहान्छु ।
तपाँईले हेरेको पहिलो नेपाली मुभी ?
कित माँया कित चिनो । ठ्याक्कै याद भएन ।
आफु कति सेक्सी छु जस्तो लाग्छ ?
लाग्दैन । बाहिरबाट हेर्दा सिम्पल नै छु जस्तो लाग्छ ।
आफ्नो ड्रिम बोय कस्तो होस् भन्ने चाहानुहुन्छ ?
अनुशासित होस् । सबै संग मिल्न सक्ने । माँया गर्ने,मेरो भावना संग मेल खाने । मेरो आमाबुवालाई आफ्नो आमाबुवा ठान्ने ।
पुरुष (केटा) हरुको के कुराले आकर्षण गर्छ ?
बानि व्यवहार ।
झुट कत्तिको बोल्नुहुन्छ ?
बोल्छु कहिले काँहि । तर एकदम कम बोल्छु ।
बाहिरी सुन्दरता र भित्रि सुन्दरता मध्ये एक रोज्नुर्यो के रोज्नुहुन्छ ?
भित्रि सुन्दरता ।